I-China iBlack Cotton Canvas Cloth Tote Shopping Hand Bag enelogo kunye neZantsi MOQ yoMvelisi kunye noMthengisi | Zhihongda
Umqhaphu omnyama weCotton Canvas Tote Shopping Shopping Bag eneLogo kunye neZantsi MOQ
KOMATSHINI WOKUQHUBEKA KUNYE NEE-ECO-EZIWUFANELEKILEYO IZINTO ZEKOToni. Zenziwe ngetreyini eshinyeneyo nenomgangatho, enokuthi ibambe ukuya kuthi ga kwi-50 + yeepawundi zokutya kwaye ithathe indawo yeebhegi ezi-2-3 eziqhelekileyo zokutya. Ngokusebenzisa kwakhona iibhegi zokutya ezinokuphinda zisetyenziselwe umsebenzi onzima kunye nokugcina iplastikhi kwindawo yokulahla inkunkuma nolwandle!
1.Imibala eyenziwe ngokwezifiso, ubungakanani, uhlobo, njl, yonke imfuno inokufezekiswa
2. OOMATSHINI OBHEKEKILEYO NEZINTO EZIQHELEKILEYO KWEEKHOTI. Zenziwe ngetreyini eshinyeneyo nenomgangatho, enokuthi ibambe ukuya kuthi ga kwi-50 + yeepawundi zokutya kwaye ithathe indawo yeebhegi ezi-2-3 eziqhelekileyo zokutya. Ngokusebenzisa kwakhona iibhegi zokutya ezinokuphinda zisetyenziselwe umsebenzi onzima kunye nokugcina iplastikhi kwindawo yokulahla inkunkuma nolwandle!
3. Zintle iiprojekthi kunye nezipho! Zintle nge-DIY! Zilungile kwiprojekthi yosuku lomama, iiprojekthi ze-DIY! Ukwenza izinto zezipho zeKrisimesi! Ezo ngxowa ze-canvas ziyasebenza ekwenziweni kwayo nayiphi na imifanekiso ye-sublimation. Umsebenzi omkhulu weqela! Ungasebenzisa ipeyinti ye-acrylic kwaye abantwana baye bavutha. Ubungakanani obulungileyo kunye nokulunga kwepeyinti.
4. Uyazibuza ukuba uza kunika ntoni kwiprojekthi yezobugcisa? Ezi ngxowa zinombono wokuzihombisa ngokwazo ngepeyinti yobugcisa. Umgangatho oMkhulu, uhlanjwe kakuhle, uya kuba ulungele ukuhombisa! Ukugqibelela kwepeyinti! Tote entle yokusebenzisa iHTV kwizipho ezizezakho! Ezi ngxowa zezona zilungele ubungakanani betote. Banokulingana izinto ezininzi ngaphakathi kubo kwaye zenziwe kakuhle. Ungasebenzisa ipeyinti ye-acrylic kunye neebhrashi zokupenda, icekeceke ngokwaneleyo ukuba ipeyinte ngaphezulu kwayo!
ISIQINISEKISO SOKUQHAWULWA KWONYAKA WONYAKA: Sizakubuyisela okanye sibuyisele imali kuzo naziphi na iingxowa ezikrazukileyo okanye ezaphukileyo phakathi konyaka omnye wokuthenga. Gcina imali kwii-odolo ezininzi zamaQhekeza ngeepakethi zethu!
Igama lomxholo Umqhaphu omnyama weCotton Canvas Tote Shopping Shopping Bag eneLogo kunye neZantsi MOQ
Egqithileyo I-100% yeCotton Canvas Tote yokuthengwa okuMnyama enokusetyenziselwa kwakhona iGrocery Bag eneprinta yehoseyile ^ p
Okulandelayo: Ukuphinda kusetyenziswe kwakhona i-canvas ye-canvas tote bag ephethe i-Bottom Gusset
Elungiselelweyo Custom kwizinga eliphezulu Imfashini yomqhaphu ...
Intengiso yeNtengiso eshicilelweyo yesiko ...
Ihowuliseyili 100% 100% yomqhaphu engxoweni ngelaphu ...